सुशान्तले डायरीमा यस्तो शब्द लेखेका रहेछन् , पुर्वप्रेमिका अंकिता सम्हालिन सकिनन् ……. – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/सुशान्तले डायरीमा यस्तो शब्द लेखेका रहेछन् , पुर्वप्रेमिका अंकिता सम्हालिन सकिनन् …….
सुशान्तले डायरीमा यस्तो शब्द लेखेका रहेछन् , पुर्वप्रेमिका अंकिता सम्हालिन सकिनन् …….
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले धरती छाडेको पनि दुई हप्ता बढी बितिसकेको छ। सुशान्तले आखिर किन यस्तो कदम उठाए, भन्ने कसैलाई थाहा छैन। उनको आत्मह’त्यालाई लिएर बलिउडमा अनेक थरिका प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। उनको आत्मह’त्यालाई ह’त्याको विषय बनाएर बलिउडमा चर्को बहस चलेको छ। यसैबीच पुलिसले सुशान्तको डायरी फेला पारेको थियो। पछिल्लो समय सुशान्तले डायरीमा के लेखेका थिए भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बनेको छ।
सुशान्तलाई पढ्न र लेख्न निकै मन पर्थ्यो। उनले आफ्ना खुसी र दुखका पलहरू डायरीमा लेखेर राख्थे। उनले डायरीमा आफ्नी पूर्व प्रेमिका अंकिताको बारेमा धेरै लेखेका रहेछ। सो पढेर अंकिता निकै भा’वुक बनेकी छन्। सुशान्त गएदेखि अंकिता शो’कमा डुबेकी थिइन्। यस्तोमा सुशान्तले डायरीमा आफ्ना लागि लेखेका शब्दहरू पढेर अंकिताले आफूलाई स’म्हाल्न सकेकी छैनन् ।
डायरीमा सुशान्तले अं’किता आफ्नो निकै मिल्ने साथी अनि प्रेमिका भएको लेखेका छन्। अंकिता यस्ती साथी जसले सुशान्तको संघर्षलाई नजिकैबाट देखेकी छन्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफूलाई साथ दिने एक मात्र साथी अंकिता रहेको उनले डायरीमा लेखेका छन्।
अंकिताजस्तो साथी आफूले कहिल्यै नपाउने र आज पनि अंकितालाई धेरै मिस गर्ने कुरा सुशान्तले डायरीमा उल्लेख गरेका छन् । आफूहरू पवित्र रिस्तामा भेटिएको र आफूहरूको सम्बन्ध निकै पवित्र रहेको कुरा पनि सुशान्तले लेखेका छन् । आफ्ना लागि लेखिएका यी शब्दहरू पढेर अंकिता निकै भा’वुक बनेकी छिन्।
म्यानमारमा भयानक पहिरो, कम्तीमा १३ जनाको मृत्यु
पतिलाई अन्तिम पटक अँगालो हाल्दै भक्कानिइन् गर्भवती मेघना , आफ्नो बच्चाको अनुहार हेर्न नपाउँदै संसारबाट बिदा भए चिरञ्जिवी
खुल्यो यौ’नबजार, कि’स गर्न प्र’तिबन्ध अनुहारबाट मास्क खोल्न नपाउने !
हतारमा कोरोनाको खोप ननिकाल्न भाइरसविद् डाक्टर फाउचीकाे चेतावनी